ụlọ elu ụlọ elu telecom Manufacturers - China telecom tower Factory, Suppliers
Ogidi poolu Ọ bụrụ na elu ụlọ nke mpi ahụ erughị mita 6, a na-atụ aro ka ị jiri poolu elu mpi elu. Mpi poolu n'ozuzu ya dị mita 4-9, na-ejikarị antennas 1-3, nke D = 60-89 galvanized steel pipe, ya na obere mkpanaka ọkụ nke ogologo 500mm dị n'elu, na poolu ahụ mgbidi-ndokwasa ma ọ bụ onwe ha Ma ọ bụ sere akara. Nkwurịta okwu osisi ngwaahịa atụmatụ: ọtụtụ ndị na-eji gburugburu osisi udi, mara mma, mfe na achikota; Dị iche iche nkọwapụta ...
ngwa ndakwa nri ụlọ elu / redio agbasa ozi Tv ígwè ụlọ elu
A na-akpọ ụlọ elu ndakwa nri microwave ụlọ nkwukọrịta microwave. Ọ bụ ụlọ elu ígwè na-akwado mpi parabolic. A na-ejikarị ya eme ihe maka sistemụ eletriki maka nnyefe microwave na nnabata. A na-etinye ya n'ogo dị elu. Towerlọ elu microwave bụ ihe owuwu ígwè. Microwave nkwukọrịta nkwukọrịta n’ozuzu ha na-ekokwasị antennas ntụziaka (mpempe akwụkwọ) ma ọ bụ antennas omnidirectional (mpi ndị yiri mkpanaka), nke a makwaara dị ka ụlọ nkwukọrịta. Ngwa ndakwa nri ...
mbara telecom ụlọ elu
Mmiri telecom ụlọ elu
Towerlọ nkwukọrịta nkwukọrịta ma ọ bụ ụlọ elu Wi-Fi, ụlọ elu redio nke ụlọ elu TV bụkarị ihe owuwu ndị toro ogologo e mere iji kwado antenna maka mgbasa ozi na nkwukọrịta, gụnyere televishọn. E nwere ụdị nkwado abụọ dị mkpa: nkwado onwe onye na usoro aghụghọ. Dị ka a ga - asị na ụlọ elu nke nnyefe ọkụ, ụdị kachasị ewu ewu bụ ụlọ elu igwe. XY Tower na-enye ụdị ụlọ elu telecom.
Ngwaahịa anyị na-ekpuchi elu ụlọ elu 60m elu telecom elu. Ọ bụ ezie na nhọrọ nke ụdị ụlọ elu telecom karịrị ụlọ elu akara. Ka ihe atụ, monopole elu, tubular ígwè ụlọ elu, n'akuku ígwè ụlọ elu, ọgwụgwụ wdg Anyị nwere ike na-enye a ngụkọta ngwọta, gụnyere drawings na ngwaahịa nke telecom ụlọ elu ahịa anyị.
monopole bụ ụlọ na-eguzo onwe ya ogologo nchara ụlọ elu nke nwere ọkpọ nchara ígwè dị ka isi ihe. Ọ nwere ọmarịcha ọdịdị na usoro dị mfe. Akụkụ nke ụlọ elu ahụ bụ okirikiri ma ọ bụ polygonal. Ọ nwere obere akara ukwu na arụmọrụ dị elu. Ọ bụ ọtụtụ ebe Communication ụlọ ọrụ; ịme ngosi uwe na-ekewa / n'elu ikpo okwu ụdị otu tube ụlọ elu, mgbodo ụdị otu tube ụlọ elu, ìhè poolu ụdị odida obodo elu, abụọ-wheeled odida obodo elu, bionic osisi ụlọ elu, wdg
Guyed ụlọ elu, ike nnyefe guyed ụlọ elu, nkwurịta okwu guyed elu. Njirimara nke ụlọ elu guyed: obere akara ụkwụ, nhọrọ ntanetị dị mma, ịdị arọ dị mfe, njem na ntinye dị mfe, na oge iwu ihe dị mkpirikpi.